Ruushka oo badalay siyaasaddiisa Ukraine - BBC Somali
Ruushka oo badalay siyaasaddiisa Ukraine
Image caption Qaar ka mid ah dadka doonaya in afti laga qaado
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu u arko go'aanka dalka Ukraine ee doorashada madaxtinimada oo laqabanayo daba-yaaqada bishan, inay tahay tallaabo loo qaaday dhanka wanaagga.
Balse waxa uu sheegay in doorashadaasi aysan waxba soo kordhin doonin haddii aan la difaacin xuquuqda dhammaan muwaadiniinta Ukraine.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kaddib markii afhayeenkiisa uu sheegay in doorashadaasi ay noqonayso mid aan caqli gal ahayn.
Mr Putin ayaa sidoo kale ugu baaqay fallaagada gooni u goosadka ah ee dalkiisa taabacsan ee ku sugan bariga dalka Ukraine in ay dib u dhigaan qorshaha ay ku doonayaan afti ku saabsan madax-bannaanidooda.
Waxa uu intaasi ku daray in uu ciidamadiisa militariga uu kala baxayo xudduudaha uu Ruushka la wadaago Ukraine.
Hase yeeshee, ra’iisul wasaaraha ku meelgaar ka ah ee dalka Ukraine ayaa hadal la iska yiri ka soo qaaday, ereyada madaxweynaha Ruushka.
Magaalada Donetsk, mid ka mid ah taageerayaasha Ruushka, Roman Lyagin, oo iskuu magacaabay inuu yahay madaxa guddiga doorashada ee gobolkaasi ayaa sheegay inay socoto u diyaargarowga aftida oo la qabanayo Axadda soo socota.
Qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladan bariga ku taalla ee Donetsk waxay dhankooda tilmaameen in go’aanka ay aftida ku qabanayaan aysan ahayn mid ay weydiinayaan ama uu u sheegayo madaxweyne Putin.